Zimbabwean authorities arrest dozens of protesters as anti-government protests spread across the country.
A major search and rescue operation is underway following a collapse at a gold mine in Bindura, Zimbabwe. Around 30 miners remain unaccounted for since the collapse, while six men have emerged alive from the mine.
12 people, including Booker Prize-nominated author Tsitsi Dangarembga, are released from detention by Zimbabwean authorities for participating in anti-government protests in the capital of Harare yesterday. They are to return for trials on September 18.
Zimbabwe summons the U.S. envoy for comments by U.S. National Security Advisor Robert C. O'Brien suggesting that Zimbabwe is among "foreign adversaries" that could face retaliation for trying to foment unrest in the U.S. over the killing of George Floyd.
The High Court of Zimbabwe overturns bans on protests in Harare.
Evan Mawarire, the most visible leader of the protests in Zimbabwe, is arrested and charged with "inciting public violence and disturbing peace."